Maitiro ekuisa mafolda mukati memafolda mu iOS 9 | IPhone nhau
Maitiro ekuisa mafolda mukati memafolda muIOS 9
Kubva kutanga kwenguva, imwe yeiyo Cydia kunyorera yakatarwa yakakosha kune vakawanda yave iri FolderEnhancer. Iyi tweak yakatibvumidza kupfuura izvo zvisingakwaniswi neApple pane manejimendi emafaira mukati meIOS, nekudaro tichikwanisa kugadzira mapeji mukati memafolda uye nekuisa ese maapplication ataida zvisinei nenhamba. Parizvino hapana Jailbreak yeIOS 9, asi zvakadaro ehe pane hunyengeri hwekukwanisa kuisa mafolda mukati memafolda pasina kumuda. Zviri nyore kwazvo uye isu tinotsanangura kuti sei mune ino vhidhiyo.
Maitiro acho aigona kutadza kuve nyore, sezvauri kuona muvhidhiyo iri pamusoro. Iwe unongo fanirwa kuisa ma icon mu edit modhi (kuzunza) uye sarudza dhairekita ratiri kuda kufamba. Kuchengeta iyo folda yakadzvanywa tinoifambisa zvishoma uye nerumwe ruoko tinodzvanya kakawanda uye nekukurumidza pane iro folda ratiri kuda kuisa rekutanga. Mune imwe yeaya mabhatani mafomu achavhura uye tinogona kuisa dhairekodhi rekutanga mukati. Zvinotora zvishoma zvekudzidzira asi zviri nyore chaizvo. Zvinotaridzawo kuti kana nekudzokorora kurudyi pane folda isu tichiedza kuzviita pane imwe yezvidhori zvidiki mukati, zviri nyore kuti ivhure.
Parizvino ndiyo chete imwe nzira yatinofanira kuisa mafolda mukati memafolda muIOS 9. Kunyange hazvo Apple yakabvisa akawanda marambidziro ekutanga, isu hatina sarudzo iyi inowanikwa muIOS 9. Chinhu chakakosha ndechekuti kana pane imwe nguva ukatangazve nharembozha yako maforodha anodzokera kunzvimbo yawo, saka uchafanirwa kudzokorora maitiro kudzosera maforodha panzvimbo. Zvichakadaro isu tichakamirira kuti Jailbreak ioneke iyo inoita senge iri kushomeka asi ichiri kumiririra nzira yekutiza kune vashandisi vazhinji vasingade kuzviisa kuzvinongedzo zveApple.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 9 » Maitiro ekuisa mafolda mukati memafolda muIOS 9
Mhoroi, ipad yangu icloud kugona kwaive kwakazara uye iyo system haindibvumidze ini kudzima mamwe em backup makopi ezvekushandisa senge mitambo, uye zvisina basa mafaera. Maitiro ekudzima aya makopi kana iyo sisitimu ichiti haigone kudzimwa?
Wake Alarm Clock, wachi yekucherechedza sekushandiswa kwevhiki
Iyo kamera yeiyo iPhone 6s (12MP) inoenderana neyeiyo Xperia Z5 (23MP)